32 Pearls Dental Clinic | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
32 Pearls Dental Clinic | Mayangone
32 Pearls Dental Clinic ကို အမှတ် ၅၀၊ ပထမထပ်၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက် ၊မရန်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် 2012 ခုနှစ်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်မှ စနစ်တကျ သန့်ရှင်းစွာ အကောင်းဆုံး ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။ သွားကျန်းမာရေးနှင်.အလှအပအတွက်ဖြစ်သော စိန်တပ်ခြင်း၊ သွားညှိခြင်း၊ သွားစိုက်ခြင်း၊ လေဆာဖြင်.သွားဖာခြင်း၊ သွားအမြစ်ထုတ်ကုသခြင်း၊ သွားဖြူဖွေးအောင်ပြုလုပ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေ၏အလှဆုံးအပြုံးတွေအတွက်
32 Pearls သွားဆေးခန်းမှ တာဝန်ယူ မှာဖြစ်ပါသည်။ ဆေးခန်းဖွင့်ချိန်မှာ မနက် ကိုးနာရီမှ ည ရှစ်နာရီအထိဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ပိတ်ပါသည်။
09:00 AM - 08:00 PM ( ပိတ်သည် တနင်္ဂနွေနေ )
No 50, 1st floor, Thamine Train Station Road, Mayangone Township, Yangon
အနီးအနား သမိုင်းကျောင်းရှေ့  မှတ်တိုင် မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
32 Pearls Dental Clinic is located at No 50, 1st floor, Thamine Train Station Road, Mayangone Township, Yangon since 2012. At this Clinic, doctors provide complete dental care with the highest standard of treatment, tailored specifically to each individual client. The clinic offers root canals, implant crowns and bridges, fillings, veneers, cleaning, whitening, braces and services for children. Open 9:00 AM to 8:00 PM and Sunday is closed. You are warmly welcome to visit to care your valuable tooth.
Beauty Rose Beauty Paradise